Nin Somali ah Oo Gabar Soomaali ah uga dhalay 5-caruur Jameekaan - iftineducation.com
iftineducation.com – Gabdhaha Soomaalida ah ee ku dhaqan wadank Ingiriiska ayaa la sheegayaa in si waali ah ay u guursadaan ragga dhalasha ahaan ka soo jeeda wadanka Jameka oo inta badan la saaxiibka ah gabdhaha Soomaalida.
Dhacdadii ugu danbeysay ayaa waxa ay ka dhacday wadanka Sweden ayaa la sheegayaa in ay halkaasi ka dhacday ayadoona gabar Soomaali ah ay u dhashay wiil isna Somali-jareer ah 4-ciyaal waxa uuna wiilkaasi u ekyahay sida Jameekaanka oo kala ayadoona u guursatay kuna qaanacsaneed dhalashada uu u sheegay wiilka oo aheyd in uu kasoo jeedo wadanka Jameeka.
Mohamed Idris oo ah wiil Somali Muslim ah ayaa waxaa dhacday in gabadhii ay uga tagtay maalin maalmaha ka mid ah caruurta waxa uuna ahaa Mr. Idriis mid caruurtiisa ku ciyaarsiinaya guriga dhexdiisa isagoona kula hadlayay afka Soomaaliga oo maqashay Xamdi kana naxday markii ay maqashay hadalka Mohamed, waxa ayna weydiisay in meesha uu afka ku bartay isagoona ugu jawaabay ” naa aniga ayaa Soomaali ah “.
Xamdi ayaa oohin meel la fadhiisatay ayadoona tiri ” Alla maanta miyaan guursaday …. ” ma jeceli inaan halkaan ku sheego ereyada ay tiri gabadha balse Mohamed ayaa ahaa wiil dhalasha ahaan ka soo jeedo Somali-jareer oo sida aan ognahay u eg sida Jameekaanka oo kale.
Hadaba in aan ka faano dadkeena oo aana raboono ajaanibta ma aha mid ku cusub dhagaha Soomaalida balse dhacdo sidaa oo kala ah ayaa waxa ay horay uga dhacday sanadii 2005-ta dalka Mareekanka ayadoona sidaa oo kale gabar Soomaali ah ay ugu dhashay wiil sidi Mohamed oo kale dhowr caruur oo ugu danbeyntii warbaahinta u sheegtay in ay ka shaleyneyso.
Ma aqaan ujeedka haweenkeen balse dhacdaan ayaa haaataan aad looga war hayaa wadanka Sweden ayadoona Xamdi Aabaheed oo markii hore ku faraxsanaa in ay guursato wiillka Jameekaanka ay u maleeyeen uu haatan ka carooday. waalidkii ayaa sidaa ah maxaad ka fileysaa caruurtana.